GNOME 41 inoshandisa libadwaita kugadzira iyo UI kuenderana | Linux Vakapindwa muropa
GNOME 40 yakaburitswa vhiki rapfuura uye isu tatoziva zvishoma zvinhu nezve iye anotsiva. Sezvatinoverenga mukati iyi inopinda kubva kuAdrien Plazas 'blog, GNOME 41 inosvika ne libadwaita, inova GTK 4-based libhandy port iyo ichaita basa rakakosha mukutsanangura mutauro unoonekwa uye ruzivo rwevashandisi mumaGNOME application. Chinangwa kana izvo zvinotsvakwa neshanduko iyi kugadzirisa kusagadzikana.
libadwaita ichaedza kubatsira kubatanidza kunyorera kweGNOME uye nekuvandudza marongero ehunhu hwevanhu ichitendera GTK 4 kufambira mberi uye kushandiswa nevanozvimirira veGNOME vanogadzira (nharaunda). Libadwaita inogona kushandiswa muGNOME GTK 4 mafomu, ayo anotendera kubatanidzwa kuri nani uye zvese zvinoshandiswa zvichagovana dhizaini.
GNOME 41 iri kuuya mushure mezhizha
GNOME 41 ichauya ne libadwaita, libhandy's GTK 4 port iyo ichaita chinzvimbo chepakati pakutsanangura mutauro unoonekwa uye ruzivo rwevashandisi veGNOME application.
La kusagadzikana Iri idambudziko rakaonekwa nevashandisi veUbuntu, kunyangwe nekuda kwezvimwe zvikonzero. Kusvikira Groovy Gorilla, pane zvikamu izvo zvisingatarise chaizvo kana iyo default theme yashandurwa, ndosaka Ubuntu 21.04 ichauya nemamenyu erima panzvimbo pechena. Neshanduko dzakarongwa kune inotevera vhezheni yedesktop, Ubuntu 21.10 ine chokwadi chekutaridza zvirinani kupfuura iyo vhezheni yakaburitswa gore rapfuura, muna Gumiguru 2020.
GNOME 40 Iyo desktop ichashandiswa naFedora 34, asi kwete Ubuntu 21.04 Hirsute Hippo, anozozvimaka "aDebian" mupfungwa yekuti achakanganisa kudivi rekuchengetedza kuti arege kukanganisa chiitiko chevashandisi. GNOME 41 iri kuuya kudonha uku, unenge mwedzi usati waburitswa Fedora 35 uye Ubuntu 21.10.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GNOME 41 inoshandisa libadwaita kuita kuti interface iratidzike zvirinani kana uchishandisa GNOME Apps